Buraayyuu keessatti Komaander Solomon Taaddasaa qaamni mootummaatin ajjeefame | Kichuu
Posted on February 21, 2020 by kichuu_admin
2. Jilli KFO guyyaa borii magaalaa Buraayyuutti marii nii gaggeeffata. Sana
danquuf dursanii jeequmsa ofumaa uumuuf itti yaadanii gochuu danda’u.
Via Eyasu Keno Abdisa
Galgala kana akka tasaa saa 1.30 keessa korean hospital kan jedhamu naannoo boolee garjitti kan argamu daaima obboletti koo dhukube achii geessine turre.akkasa hara oduun fb kanarra nanawa jirtu ni jira. akkasuma taii burayyutti hara taen wal qabate waraanni mootummaa kana kan hara rukutamani gara hospitaala kana gefaman ni jiru. Akkan namoota achi jiran irraa odeeffadheti waraanni lama rukutamani walaansa baqasani yaaluun kan geggefama jiruf ni jira. Mooraan hospitaala kana waraana hidhatee jiruu fi namoota gurguddaa jedhaman san kan suufii uffatanin guutetti.gariin ni boaa,gariin meeshaa afaan galchatee dalga nama ilaala.mooraan hospitaalicha nagaa hin qabu. osoo kanaan jiru dubbiin tokko gurra koo na buute jirti.innis akkas jedhu qaamonni hidhatani achii jiran”Erga walii keenyan wal galaafanna taee maaf hidhanne wal faana deemu na barbaachisaree,diinni keenya walii keenya erga tae kan”jedhu dubatu. suuraa kaasuuf haala mijata hin argane. garuu suura tokko namni waliin deeme dhoksee kaaseera. ishee waliin erga kana isinin gahuf dirqamen. Haa tau malee jecha qaama hidhate achi jirurra kan hubatamu walii isaani kan wal ajjeessan tauusati. Egaa lubbuun wal hin caaltu. kutataan dhiiraa gara centeral oromiyas gaeera.quba qabaadhu. Dhiigni lammii koo lixa oromiyaa fi gujirra dhangalaatu hanga kana nama hin iyyisiisnem. fala.hin qabu awwaalachudha bilxiginnaan. Liqimsi itti didi dhuma.
video khan dawadha #share walif godha
Ummata Simannaa Jila KFO tiif Guyyaa Har’aa Magaalaa Sabbataatti bahee ture Daandii itti Cufuufuu fi gochaawwan Doorsisaa irratti raawwachuun Qaamolee Mootummaa Naannoo san jiranii fi Miseensota Poolisii gochaawwan kana raawwatan Komachiiseera.
Gochaawwan Al- Seerummaa fi Biyya tana irraa Abdii nama murachiisan hundumaa Qaaman keenyaan achitti argamnee kan hordofne yoo ta’u Hawaasni Jila KFO simachuudhaaf heddumminaan achitti argamanis Miira guyyaa har’aa Qaamoleen mootummaa isaanirratti raawwatan balaaleeffachuudhaan Hegeree Biyyattii tanaatiifis kan yaaddawan akka ta’e dubbatanii jiru.
Mootummaa abdii kutate. Mee biyya kam keessatti waraanni Meeshaa akkanaa qabatee magaalaa keessa deemee ummata doorsisa?
Kun Awwadaayi keessa yeroo raayyaan waraana Abiyyii ummata Oromoo irratti dhukaasudha.
These are the insiders!!